Global Voices teny Malagasy » Ry Mpikatroka Malala Ao Hong Kong, Mba Atsaharo Azafady Ny Filazana Amin’ny Rehetra Hoe Azo Antoka Ny “Telegram” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 09 Aogositra 2016 17:47 GMT 1	 · Mpanoratra inmediahk.net Nandika Tantely
Sokajy: Azia Atsinanana, Hong Kong (Shina), Fanoherana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Teknolojia, GV Mpisolovava
Tamin'ny diabe fanao isantaona ny 1 Jolay an'i Hong Kong , nanao ezaka lehibe niresahana ny Telegram, fitaovana fampiasa amin'ny finday hifampiresahana, ireo mpitarika hetsi-panoherana, saingy noho ireo antony ratsy rehetra. Natao isantaona ilay fifamoriana, hatramin'ny namerenan'i Royaume-Unis ny fahefana amin'ny Hong Kong hiverina amin'i Shina, ny taona 1997.
Misy vondrona mikolokolo olompirenena, Citizen Data, mamporisika ireo mpanao hetsi-panoherana  hitroka ny “Telegram” ary handefa ny tolotra ahafahana mahita ny toerana misy anao, amin'izay isika afaka “manaraka” ny hetsika.
Arakaraky ny nandalovanay ireo tranohevan'ireo vondrona ara-politika sy fiarahamonim-pirenena isan-karazany teny an-dàlana, nilaza taminay mba hinamana amin'ireo “robots” an'ny Telegram izy ireo (kaonty Telegram mandeha ho azy, izay manatanteraka tolotra tsotra, toy ny fitadiavana sary na ny fanavaozana ny RSS-n'ny Tia) . Manome alalana ireo mpikambana ny “robot” iray mba hampahafantatra ny fandraisany anjara amin'ilay diabe. Ny iray hafa manontany ireo mpifidy mikasika ny safidiny voalohany amin'ireo fifidianana Filankevitra Mpanao Lalàna  hoavy.
Nalaza be teo amin'ny sehatry ny teknolojia ny Telegram voalohany amin'ny naha-fitaovana fandefasana hafatra sady haingana no “maimaimpoana sy azo antoka” azy ho an'ireo mpampiasa  tany amin'ny taona 2013. Nabaribarin'ireo median'ny teknolojia ho iray amin'ireo toerana goavana fivarotany ny maha voaaro ny angon-drakitra-ny , indrindra fa ireo fanafenany kaody.
Nandritra iny taona lasa iny, notaterin'ny Global Voices ireo fitarainana marobe avy amin'ireo mpampiasa Telegram, lasa niteraka ahiahy be tamin'ny fahazoana antoka amin'ilay tolotra mihitsy. Nitatitra ireo mpampiasa Telegram any Rosia  — ny sasany amin'izy ireo mpanao gazety sy mpikatroka mafana fo — fa nisy nisompatra ireo kaontin'izy ireo. Mpampiasa iray hafa any Okraina  indray nitatitra fa naharay hafatra manokana ho anà vondrona izay tsy misy idirany mihitsy, tamin'ny alalan'ny tolotra Telegram. Ary nisy olana tany Iràna  mikasika ny fanarahan'ilay orinasa ny fitakian'ny governemanta momba ireo fitaovana sasantsasany — ireo “robots” indrindra indrindra — mba ho bahanana eny amin'ny sehatra.
Nohamarinin'ireo mpikaroka ihany koa  fa manangona ireo angon-drakitry ny mpampiasa azy — lsy ny mombamomba ireo ifandraisany, ny fotoana niresahany, ary aiza, ilay tolotra– manamora ny fifanaraha-maso amin'ny fahazarana miresadresaky ny tsirairay mpampiasa Telegram.
Samy mahalala daholo ireo rehetra manao fikatrohana ara-politika any Hong Kong hoe mety ho henjana  ny vokatr'izany karazana triatra izany.
Ary ny WhatsApp, izay notsikeraina tamin'ilay diabe anefa, tonga dia mampiasa ho azy kaody fanafenana amin'ireo resadresany rehetra izy, tafiditra amin'izany ny vondrona fifampiresahany. (Nampidirina tamin'ny voalohandohan'ity taona ity, ny volana Aprily  io tolotra io.)
Tsy hoe manisy kaody ireo hafatra rehetra mandalo ao aminy fotsiny ny WhatsApp, fa mampiasa ny loharano misokatra ihany koa, mamelabelatra ho an'ny rehetra ny protocol ampiasain'ny Signal, novokarin'ireo vondrona tsy mitady tombotsoa antsoina hoe “Open Whisper Systems”. Indrisy, tsy misy loharano misokatra raha ny WhatsApp manokana fotsiny, noho izany, tsy misy fahazoana antoka mihitsy hoe tsy ho voatohintohina ilay protocol mandritra ny fametrahana azy. Hatreto anefa, tsy mbola nisy porofonà hadalana niseho, ary nanoratra ho hitan'ny rehetra ny ekipan'ny Open Whisper Systems  mikasika ny fiarahamiasany sy ny fizotry ny fametrahana. Fa azo antoka fa tsy ratsy noho ny Telegram io, izay tsy namoaka ho an'ny rehetra ny teknikan'ny kaodiny.
Ho an'ny fiarovana lehibe indrindra azo antoka, manome soso-kevitra anareo izahay hampiasa ny tolotra Hafatra Miafina an'ny Signal  an'ny “Open Whisper System”. Loharano misokatra hatrany amin'ny fotony ny Signal — mangarahara tanteraka izy ireo amin'ny teknolojian'ny fanafenana kaody ampiasain'izy ireo, sy ireo zavatra rehetra hafa. Fa satria io tetikasa loharano misokatra tsy natao hitadiavana tombony, tsy ampy ireo lakolosy sy kiririoka (toy ireo “autocollant”), ary fototra ho an'ny resadresaka ara-barotra toy ny Telegram sy WhatsApp. Ho an'ny ankamaroan'ireo mponin'i Hong Kong, tsy mahasintona azy ny Signal noho ireo antony ireo. Maro ireo misafidy mampiasa ny WhatsApp noho ity farany izay safidy iray azo antoka kokoa ho fanolo. Raha tsy ampy ireo fiarovana manokana sasany  ho an'i Signal io, izy no hany fitaovana ampiasaina miresaka mivantana manerantany izay mampiasa fizotranà kaody misokatra sy voazahan'ireo namany hafa.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/08/09/86479/
 diabe fanao isantaona ny 1 Jolay an'i Hong Kong: https://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong_1_July_marches
 mamporisika ireo mpanao hetsi-panoherana: http://news.mingpao.com/ins/instantnews/web_tc/article/20160701/s00001/1467339104163
 Filankevitra Mpanao Lalàna: https://en.wikipedia.org/wiki/Legislative_Council_of_Hong_Kong
 haingana no “maimaimpoana sy azo antoka” azy ho an'ireo mpampiasa: https://techcrunch.com/2013/10/27/meet-telegram-a-secure-messaging-app-from-the-founders-of-vk-russias-largest-social-network/
 maha voaaro ny angon-drakitra-ny: http://www.theverge.com/2014/2/25/5445864/telegram-messenger-hottest-app-in-the-world
 Mpampiasa iray hafa any Okraina : https://globalvoices.org/2016/07/01/telegram-bug-leaks-russian-tv-news-stations-internal-chats-to-random-user/
 olana tany Iràna: https://globalvoices.org/2015/08/28/is-telegrams-compliance-with-iran-compromising-the-digital-security-of-its-users/
 Nohamarinin'ireo mpikaroka ihany koa: http://gizmodo.com/why-you-should-stop-using-telegram-right-now-1782557415
 mety ho henjana: https://globalvoices.org/2014/09/27/violent-clashes-between-hong-kong-police-and-peaceful-student-protesters/
 tolotra Hafatra Miafina an'ny Signal: https://whispersystems.org/
 tsy ampy ireo fiarovana manokana sasany: http://mashable.com/2015/03/09/whatsapp-tips-and-tricks/#4hZoLH0T_8qC